” ဘယ်သူကို ရွေးမှာလဲ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” ဘယ်သူကို ရွေးမှာလဲ”
” ဘယ်သူကို ရွေးမှာလဲ”
Posted by ခင်ခ on Nov 28, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 16 comments
ပေါက်ကရ အတွေး အရေး။
တခါတုန်းက မြို့ကလေးတစ်မြို့မှာ လူကုံထန်လူချမ်းသာ မိသားစုရဲ့ သားတစ်ယောက်နဲ့ သတင်းစာပို့ ဖိနပ်ချုပ်အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆင်းရဲသားမိသားစုရဲ့ သားတစ်ယောက်တို့ရှိတယ်တဲ့။
သူဌေးသားက မနက်မုန့်ကို မှန်လုံခန်းလေးနဲ့ သပ်ယပ်စွာလှပချယ်သဆောက် ထား တဲ့ ကော်ဖီ ဆိုင်မှာ ဟန်ဘာကာစား ကော်ဖီသောက်တဲ့အခါ ဆင်းရဲသားသားကတော့ လမ်းဘေးပလက်ဖောင်း မှာဖွင့်တဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ အီကြာကွေးနဲ့ လဘက်ရည်ပေါ့ဗျာ။
သူဌေးသားက သူအလုပ်သွားတဲ့အခါ မှန်လုံကားကို အဲကွန်းဖွင့်ပြီး ချွေးမစို့ဘဲ သွားပေမယ့် ဆင်းရဲသား ကတော့ စက်ဘီးလေး လမ်းကြမ်းလေးကနေ ဖိနပ်ပါးလွှာ ရာဘာဖိနပ်အစုတ် နဲ့ ချွေးပေါက်ပေါက်ကျအောင် နင်းကာသွားကြတယ်။
လူဆိုတာ စိတ်ညစ်မှု အဆင်မပြေမှုဆိုတာကတော့ ချမ်းသာဆင်းရဲမရွေးရှိတတ်ကြတာမို့ သူဌေးသားက အဲလို စိတ်ညစ်တာကြုံတော့ အပေါင်းအသင်းဘော်ဒါတွေနဲ့ ဘီယာဆိုင်မှာ သောက်စားကာရင်ဖွင့်ပြောနေတဲ့အခါ ဆင်းရဲသားကတော့ မီးမှိန်မှိန်ဘုံဆိုင်လေးရဲ့ အတွင်းထောင့်ကျကျစားပွဲမှာ နှစ်ပက်တစ်ခွက်နဲ့မြေပဲဆာလှော် အဖော်ပြုကာ ကြိတ်ကာဆွေးပေါ့ဗျာ။
သူဌေးသားက ညစာကို မြို့ရဲ့နံမည်ကြီးဆိုင်က ဖုန်းနဲ့မှာပြီး အိမ်ကထိုင်စောင့် စားနေပေမယ့် ဆင်းရဲသားကတော့ ညဈေးတမ်းက ထမင်းကျော်ဆိုင်လေးမှာ ၀က်အူချောင်းတစ်ချောင်းကို အမြန်ကုန်မသွားအောင်ကိုက်ရင်း ဗိုက်ဝဖို့အရေး ငွေချိန်တွက်ပေးပြီး စားနေရပေါ့ဗျာ။
အဲလိုနဲ့ ရက် လတွေငြောင်း နှစ်တွေအလီလီပြောင်းလို့ အရွယ်တွေလည်း အတော်အတင့်လူကြီးဖြစ်တဲ့အခါ သူဌေးသားက ပါတီတစ်ခုရဲ့ကိုယ်စားပြုအမတ်အဖြစ် သမ္မတရာထူးနေရာကို ၀င်အရွေးခံဖို့ သူတို့ဇာတိမြို့နဲ့ ၀န်းကျင်မှ အမတ်လောင်းဝင်အရွေးခံပြီး မဲဆွယ်တရားဟောတယ်။
သူက သူကျင်လည်ခဲ့တဲ့ သူနေ့စဉ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘ၀အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး မဲဆွယ်တရားပွဲမှာ အခုလို ပြောတယ် ကျုပ်သာဒီမြို့ရဲ့ အမတ်အဖြစ်အရွေးခံရပြီး သမ္မတဖြစ်ရင် တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တွေမှာ ဟန်ဘာကာလို အထပ်ထပ်ဖြစ်မည့် ကွန်ဒိုတိုက်အမြင့်တွေ၊ မှန်လုံစားသောက်ဆိုင်တွေ ပါတဲ့ ရှော့ပင်းမောတွေ အခွန်နည်းနည်းနဲ့ မော်တော် ကားတင်သွင်းခွင့်တွေပေးမယ် ……. စသည်ဖြင့် မဲဆွယ်ဟောတယ်။
ဒီလိုဘဲ ခုနဆင်းရဲသားကလည်း အဲဒီမြို့ရဲ့ အလုပ်သမားလူထုပါတီကနေ ကိုယ်စားပြုအမတ်အဖြစ် သမ္မတ ရာထူးနေရာကို ၀င်အရွေးခံဖို့ သူလည်းမဲဆွယ်တရားဟောတဲ့အခါ ကျုပ်သာဒီ့မြို့ရဲ့အမတ်အဖြစ်အရွေးခံရပြီး သမ္မတဖြစ်ခဲ့ရင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေတိုးမြှင့်စေပြီး လုပ်ခလစာတွေ ထိုက်တန်အောင်ရဖို့စီမံချက် တွေနဲ့လုပ်မယ် လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတွေ လမ်းတွေကို စက်ဘီး ဆိုင်ကယ်လမ်းကအစပြုပြင်ပြီး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ် ……..စသည်ဖြင့် မဲဆွယ်ဟောတယ်။
အကယ်လို့သာ စာဖတ်သူ သင်ဟာ အဲဒီမဲဆွယ်တရားဟောတဲ့ လူအုပ်စုထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူတစ်ယောက်သာဖြစ်ခဲ့ရင် သင်မြို့ရဲ့အမတ်ကို ဘယ်သူကိုများရွေးမယ်လို့ စိတ်ကူးပါသလဲ ကိုယ်ဖာကိုယ် တွေးပြီး ဖြေကြည့်ပါလားဗျာ။
သြော် ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာအုပ်တစ်ခုမှာ လက်ရှိတိုးတက်ခေတ်မှီနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး မော်စီတုန်းက ငယ်စဉ်က လယ်သမားမိသားစုက ပေါက်ဖွားတဲ့ လယ်သမားတစ်ဦးပါတဲ့။
တိုင်းသူပြည်သားတွေကို လူတစ်ယောက်လျှင် ဟန်ဘာကာလို အထပ်ထပ်ဖြစ်မည့် ကွန်ဒိုတိုက်အမြင့်တစ်လုံးနဲ့ မှန်လုံစားသောက်ဆိုင်တွေ ပါတဲ့ ရှော့ပင်းမောတွေမှာ နေ့စဉ် အခမဲ့စားသုံးခွင့်ပေးမယ့်သူကို မဲပေးမယ်။
ဒါမှ သက်ဆိုင်တဲ့လူတန်းစားကို အကျိုးပြုမှာပေါ့…
NLD ဒေါ်စုပဲ.. မဲပေးမာ..
ပြောင်းဖူးကြီးကိုင်ပြီး မဲဆွယ်တဲ့သူ မပေးဘူးးး
လမ်းတစ်ခြမ်းပဲ ခင်းပေးတဲ့သူ မပေးဘူးးးး
သဘာဝ ဘေး အန်ဒရယ် တွေ့နေတုန်း အတင်း မဲဆွယ်တဲ့သူတွေ မပေးဘူးးး
နှစ်ယောက်လုံးဘူ့မှပေးဘူး။ သူထေးသားရွေးရင် အခွန်ဒွေစွတ်ကောက်မယ်။ ဆင်းရဲသားရွေးရင် လမ်းဘေးဈေးသည်တွေများလာမယ်။ ချမ်းသာတဲ့ အမေဒစ်ကန်သဂျီး လက်အပ်လိုက်မယ် သင့်တော်သလိုစီမံလို့
လခများများလိုချင်တယ်၊ အိမ်ပိုင်ကြီးကြီးလိုချင်တယ်၊ မီးမှန် အင်တာနက်မြန်လိုချင်တယ် သဂျီးဒါဒွေလုပ်ပေး
ဘယ်ဒူ့မှ မရွေးဂျဘာနဲ့ …
အတွေးတွေ မမှားစေဂျင်လို့ဘာဘဲ …
ဒဂယ် ဖစ်သင့်ဒါဟာ …
ကျော့်ကို ရွေးဂျဘာ …
ကျော့်ကို ရွေးယင် ခီညားဒို့ ဘာလုပ်ချင်ဒုန်း .. အဲ .. အဲ .. ဟုတ်သေးဘူး ..
ခီညားဒို့ ဘာဖစ်ချင်ဒုန်း …
ဥုံဖွ ဆို လုပ်ပေးပလိုက်မယ် …
ကျော် တဂိုးရှင် တစ်ယောက်ဘာ ….
လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသူကို လိုချင်သေးတယ်။
ဒီလို နှစ်ယောက်ထဲကမှ တစ်ယောက် ရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့
ပညာရေး စနစ်တိုးမြှင့်ရေး ဒို့အရေး
ုစားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရေး ဒို့အရေး
အင်တာနက်လိုင်းတွေ မြန်ဆန်ရေး ဒို့အရေး
လျှပ်စစ်မီး မှန်ကန်ရေး ဒို့အရေး
credit to-ကျော်ထွဋ်ဆွေ စာသားကို ဖြည့်စွက်သည်။
ကိုယ်က ဘယ်သူ့ကိုမှ မရွေးပါနဲ့
အမ်တီနိုဗွီ ကြိုက်ရာမှာစားနော်.. အနော် ကျွေးမယ်၊ ဂျူ နိုလေးဖို့လဲ ပါဆယ်ထည့် ပေးလိုက်မယ်..။ ကြောင်ကြီးက လူဂျီးသူမ သိတတ်ပါတယ်ဗျ…။
အဲဒီဆင်းရဲသား အာဏာလဲရရော အာဏာရှင် ဖြစ်ပါလေရော.. ပြည်သူတွေလဲ သောက်သောက်လဲ ဒွတ်ခ ရောက်ပါလေရော.. ဆင်းရဲသားဒေါသဆိုဒါ သိပ်ကြောက်စရာ ကောင်းပေဒါကလား..။ တရားသဘောနဲ့ ပြောရင်တော့ ဒေါသဆိုတာ အကြောက်တရားက လာတာ.. ဒေါသကြီးလေ ကြောက်တတ်လေပဲ.. ဆုံးရှုံးမှာကြောက်လို့၊ ကိုယ်လိုချင်တာ မရမှာကြောက်လို့ အတင်းမာန်တင်း စွတ်လုပ်တာ၊ ရမှန်းသိတော့ ပိုဖြဲတော့တယ်၊ တရားသောဘောင်ထဲက ယှဉ်မပြိုင်တော့ဘူး.. ခေါင်းစဉ်ကတော့ ခေတ်ကာလအရ မှန်တာလဲ ရှိမယ်၊ မှားတာလဲ ရှိမယ်.. တချိန်မှာ သမိုင်းသင်ခန်းစာ ယူကြည့်ရင်တော့ မှားတာပဲ တွေ့တယ်။ တဖက်မှာလဲ ပဋိပက္ခရှိမှ တိုးတက်တာမို့ အပြတ်ငြင်း ရှုံ့ချရန်လည်း ခက်တယ်။ မှားသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေမှာ တဖက်ဖက်က အဆုံးစွန် အနိုင်ရသွားတာ တွေ့နိုင်တယ်။ အရင်းရှင်စနစ် ဆိုးကျိုးကို ထိန်းနိုင်တာ ဆိုရှယ်လစ် အလုပ်သမား လှုပ်ရှားမှုပေါ်လာလို့.. အဲဒီ လှုပ်ရှားမှု အားကောင်းတဲ့ ဥရောပနဲ့ အားနည်းတဲ့ ယူအက်စ် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး လူမှုဖူလုံရေး ခံစားခွင့် မတူတာ သာဓကပဲ။ သူတို့ဆီမှာ တဖက်ဖက်ကို အပြတ် ချေမှုန်းမပစ်ခဲ့ (သို့) မပစ်နိုင်လို့ လိုတိုးပိုလျော့ သွားနိုင်တယ်၊ အဆိုး အကောင်းကတော့ နှစ်မျိုးစလုံး သူ့ပုံစံနဲ့ သူပါပဲ။ တဖက်စွန်း ရောက်ရင်သာ နောက်ပြန်ဆွဲတာ..။
ရန်ကုန်မှာမွေးပြီး မန်းလေးမှာ စီးပွားရှာနေတဲ့သူကိုရွေးမယ်ဗျို့။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ မြန်မာပြည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ မဲဆွယ်တဲ့အကြောင်းတွေ
မဲဆွယ်ချိန်မှာ ဘာလုပ်ပေးမယ်၊ ဘာရမယ်၊ ဘယ်လိုဖြစ်စေရမယ် အာမခံချက်တွေပေးပြီး
မဲဆွယ်တတ်ကြပေမဲ့၊ အာဏာရ၊ ရာထူးရချိန်မှာ ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလို့သိရပါတယ်။
အခုလည်း အားလုံးပဲ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေဘူးမှာပါ။
အဲဒီတော့ အပြောတစ်မျိုး၊ အလုပ်တစ်မျိုးလူလား?
ဘယ်လိုအချိန်၊ ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိူးတိုးတက်စည်ပင်အောင်
ဆိုတာကိုပဲ လေ့လာသုံးသပ်ပြီး၊ ထောက်ခံသင့်ပါတယ်။